हरियो खुर्सानी खानुको फाईदै-फाईदा, तपाईलाई थाहा छ ? यी सात रोगबाट बचाउँछ ! – Recent Nepal News
हरियो खुर्सानी खानुको फाईदै-फाईदा, तपाईलाई थाहा छ ? यी सात रोगबाट बचाउँछ !	काठमाडौं – खुसार्नी एक पीरो पदार्थ हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको अध्ययनले खुसार्नी स्वास्थ्यका एकदमै उपयोगी रहेको देखाएको छ ।
२.क्यान्सरबाट बचाउँछ : पुरुषहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । एक शोधका अनुसार खानामा हरियो
३.सँधै जवान राख्न मद्धत गर्छ :हरियो खुर्सानीमा भिटामिन इ को मात्रा निकै धेरै हुने भएका कारण यसमा प्राकृतिक तेल हुने गर्दछ जसले छालालाई नरम बनाइराख्न मद्दत गर्दछ । यसले तपाईंको छालालाई सधैँ जवान र चम्किलो बनाइराख्न मद्दत गर्दछ ।
५.मधुमेहबाट बचाउँछ : हरियो खुर्सानीले रगतमा सुगरको लेभललाई कन्ट्रोल गर्दछ । जसले मधुमेहको समस्याबाट छुटकारा दिलाउँदछ । हरियो खुर्सानीमा पाइने फाइबरले खानालाई छिट्टै पचाउन पनि पद्धत गर्दछ ।
६.हड्डिलाई बलियो बनाउँदछ : हरियो खुर्सानीमा प्रसस्त मात्रमा आइरन पाइन्छ जसले हड्डिलाइ बलियो बनाउँदछ र रगतलाई पनि बढाउने गर्दछ । महिलाहरुको लागि हरियो खुर्सानी निकै लाभदायक हुन्छ ।
७ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदछ : हरियो खुर्सानीमा भिटामिन सिको मात्रा प्रशस्त मात्रमा हुने गर्दछ जसले शरिरमा भिटामिन ‘सि’ को पुर्तिका साथै शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्दछ ।
Previousयी हुन क्यान्सरका लक्षण – पढ्नुहोस, जान्नुहोस र अमुल्य जीवन बचाऊनुहोस
Nextइन्टरनेटको पहुँच बढ्दो, गाउँमा थ्रीजी, सहरमा फोरजी